အပ်ချုပ်များအတွက် Cutters Thread | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -sewingmachineaccessories.com.tw
Hongcheng Precision Industry Co., Ltd. သုတေသန, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, ထုတ်လုပ်ခြင်း, ရောင်းချခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်စေ့စပ်တဲ့ professional ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် အပ်ချုပ်များအတွက် Cutters Thread။ ကျနော်တို့တွင်တည်ရှိပြီး, Taiwan နှင့်အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသုံးခွင့်ရှိသည်။ တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအားဆက်ကပ်အပ်နှံကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်းများအမြဲသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဆွေးနွေးအပြည့်အဝဖောက်သည်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန်ရရှိနိုင်တယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုအမျိုးအစားအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - J0442-1
ဒီဖြတ်စက် Yamato အပိုပစ္စည်းကိုအစားထိုးနိုင်ပါတယ်–3021060.ကျွန်ုပ်တို့သည်ဓါးပေါ်တွင်အရည်အသွေးမြင့်သောပစ္စည်းများကိုဂဟေဆော်ပါသည်.ဒီပစ္စည်းကိုဥရောပကလုပ်တယ်.နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီ cutter ထောင်ပေါင်းထောင်ချီကိုတရုတ်ပြည်သို့ရောင်းချသည်.ဤသည် flatseamer ရှုးဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.sewingmachineaccessories.com.tw/my/thread-cutters-for-sewing.html
အပ်ချုပ်များအတွက် Cutters Thread ထုတ်လုပ်သူနှင့် အပ်ချုပ်များအတွက် Cutters Thread ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ -ကျော် 72,666 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ sewingmachineaccessories.com.tw
Flatseamer ဖြုတ်တပ်နိုင်သောဖြတ်တောက်စက်JT0442 ဤစိတ်ကူးသည်တရုတ်မှဖြစ်သည်.ဓါးကိုအစားထိုးရန်လွယ်ကူသည်.အလွန်အရည်အသွေးမြင့် HSS ကိုကွေးရန်အလွန်ခက်ခဲသည်.ကျွန်ုပ်တို့သည်ဓါးသွားများကိုအလွန်မြန်ဆန်စွာထုတ်လုပ်နိုင်ရုံသာမကကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်းလျှော့ချနိုင်သည်.၎င်းသည်အမှတ်တံဆိပ် flatseamer cutter တိုင်း၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်.